उद्योगीले सिन्डिकेट लादेको औषधि व्यवसायी संघको आरोप «
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (एनसीडीए) ले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले चालेको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाली उद्योगीहरूले आत्मनिर्भरताको नामममा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको संघको आरोप छ ।
वि.सं. २०३० सालमा स्थापना भएदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका गुणस्तरीय औषधिहरू विदेशबाट आयात गरी सर्भसुलभ रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको एनसीडीएले औषधि आयात रोक्नुपर्ने कारणको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चुनौतीसमेत दिएको छ । ‘त्यही औषधि नेपाली उत्पादकहरूले भन्दा सस्तो मूल्यमा जनतालाई दिइरहेका छौं भने किन त्यसलाई रोक्नुप¥यो ?,’ औषधि व्यवसायी संघले प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘नेपाली जनताले सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि प्रयोग गर्न नै नपाउने सिन्डिकेट किन लाद्न खोजिन्छ ?’
स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूले आवश्यक विभिन्न ३० वटा औषधिहरू नेपालमा नै उत्पादन भइरहेको भन्दै बाहिरबाट आयत गर्न बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी ०७१ जेठ २६ गते सचिवस्तरीय निर्णयको बुदा नम्बर १३ मा पाचवटा स्वदेशी कम्पनीहरूको डोजिएर पेस गरेमा सोही औषधि कुनै पनि व्यवसायीले विदेशबाट ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । अझ रोचक पक्ष के हो भने स्वदेशी औषधि उत्पादक व्यवसायीहरू नै यतिबेला आफूले उत्पादन नगर्ने औषधिहरू आफै“ले मात्रै आयात गर्न पाउनुपर्ने रटान लगाइरहेका छन् ।
एनसीडीएले स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले आत्मनिर्भरको नाममा विदेशबाट आयत हुदै आएका औषधिहरू बन्द गराएर जनतालाई महँगोमा नेपाली औषधि भिडाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेको छ । विदेशी औषधिभन्दा स्वदेशी औषधि चार गुणा महँगोमा बिक्री गरेर जनताको ढाड सेक्न नपाइने एनसीडीएको भनाइ छ ।
यसैबीच स्वदेशी औषधि उत्पादन व्यवसायीहरूका कारण अप्ठेरोमा परेको एनसीडीएले समस्या समाधानका लागि समस्या समाधान उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । झन्डै दुई हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको यस संस्थामा २५ हजारभन्दा बढिले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । तर, यतिबेला यी सबैलाई अप्ठेरो पर्नेगरी स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरूले नियमककारी निकायलाई प्रभावमा पारेर सिन्डिकेट लाद्न खाजिरहेका छन् ।
‘नेपाल औषधिमा अत्मनिर्भर हुनु एकदमै राम्रो पक्ष हो । हामी त्यसको स्वागत गर्छौं । तर, आत्मनिर्भरताको नाममा सस्तोमा पाइरहेको गुणस्तरीय औषधि बन्द गरेर महँगो मूल्यमा नेपाली औषधि जवर्जस्ती भिडाउनु कति उचित हो ?,’ नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो गरिबीले थलिएको मुलुकमा के यो उचित हुनसक्छ ?’ अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिभन्दा हामीले बाहिरबाट ल्याएर जनतालाई सस्तोमा औषधि खुवाइरहेको अवस्थामा पनि आयात नै रोक्नुपर्ने मागमा गम्भीर नियत भएको हुन सक्ने जिकिर गरे । ‘औषधि जस्तो संवेदनशील बस्तुमा किन सिन्डिकेट लगाउन खोजिन्छ । सरकारले पनि त यस विषयमा सोच्नुपर्यो नि,’ उनको भनाइ छ ।
नियमक निकाय औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना हुनु अघि नै स्थापना भएको एसीडीएले विदेशी औषधिमात्र नभई स्वदेशी औषधिहरूको पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । एनसीडीएको एक मात्र उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको औषधि नेपाली जनतासमक्ष पुराउनु नै हो ।
स्वेदशी कम्पनीहरूले आत्मनिर्भरको नारा लगाई रह“दा कर्णाली जनताले सिटामोल नपाएको अवस्था छ भने कयौं स्थानमा जीवनजलको समेत अभाव छ । तरपनि विदेशबाट ल्याउने सस्तो मूल्यको गुणस्तरीय औषधिलाई रोकेर महंगोमा गरिव नेपाली जनताको ढाड सेक्न पल्लेका स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
एनसीडीएले अहिले पनि डब्लूएचओजिएमपी, ईयूजीएमपी, यूएसएफडी, टिजिए(अस्ट्रेलिया) लगायतले स्वीकृत प्रदान गरेको र नियमक निकाय औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृतिमा नेपालमा औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको छ । स्वदेशी औषधि व्यवसायीहरूले अर्काको व्यवसाय नै धराशायी बनाएर आफूमात्र कमाउने प्रपञ्च रचेको भन्दै एनसीडीए त्यसको विरोधमा उत्रिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनको भनाइ छ, ‘नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिभन्दा हामीले सस्तो मूल्यमा नेपाली जनतालाई औषधि दिइरहेका छौं । अब तपाईं आफंै भन्नुस् न हामीले के अपराध गरेका छौं ? औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुमा सिन्डिकेट लाद्न नखोजियोस् ।’